I-Coinbase yokuhambisa uMgaqo-sikhokelo oMiselweyo weShishini leDijithali kwiiMithetho zaseMelika
Iingxelo zamva nje zibonisa ukuba uCoinbase uqalise uhambo oluya kwiFuthe lolawulo lwe-cryptocurrency e-US. Ngokwe-tweet yakutshanje, umphathi weCoinbase uBrian Armstrong uqinisekise ukuba:
“Ngoku sidibene neefemu ezingama-30 + ze-crypto, amalungu angama-25 + enkongolo kunye nabasebenzi, iinkampani ezine zomthetho eziphambili, namaqela amathathu orhwebo malunga nesindululo sethu sokulawula i-crypto. Iqela lethu lomgaqo-nkqubo lenza umsebenzi omkhulu, kwaye sizama ukuba yinxalenye yesisombululo. ”
Umphathi omkhulu we-CEO wazityhila izicwangciso zenkampani yakhe ukuyila kunye nokungenisa imigaqo-nkqubo kumthetho wase-US kumnyhadala weTechCrunch Disrupt ngoSeptemba 22. U-Armstrong uqaphele ukuba ukwabiwa kwesi sicelo kufuneka kuqale kule nyanga.
The Coinbase Isigqeba sikwatyhile ukuba ufumene izicelo ezininzi zesindululo sesakhelo sokulawula i-cryptocurrency, njengoko iiarhente zolawulo zithanda ukufumana ingxelo yoshishino xa kusenziwa imithetho emitsha. U-Armstrong uthe ngexesha lodliwanondlebe: "Xa ndisiya e-DC, ndidibene nabantu abambalwa kurhulumente, kwaye baya kuthi basibuze," Ngaba unayo idrafti, ingaba unaso isindululo sento esinokuzama ukuyithenga malunga nendlela singalawulwa kumanyano? '”
ICoinbase ineLayisensi yokuBoleka kumazwe angama-50 kodwa ifuna isiKhokelo seFederal
Umphathi we-CEO utyhile ukuba iCoinbase yamkelwe kwaye inelayisensi njengokudlulisa imali kunye nokubolekisa ngemali kumazwe angama-50. Ukwaqaqambise ukuba utshintshiselwano lwe-behemoth lusebenza phantsi koqwalaselo lwe-Financial Crimes Enforcing Network (FinCEN), Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), i-Internal Revenue Service (IRS), uNondyebo, kunye neOfisi yoLawulo lweeAsethi zaNgaphandle (OFAC).
Oko kwathethi, u-Armstrong wakhetha ukuba angathanda imigaqo-nkqubo yolawulo endaweni yokujongana nobunzima bamazwe aliqela azimeleyo. Uye waphawula ukuba:
“Sinesindululo esifuna ukusibeka phaya esinokunceda mhlawumbi senze umbono omnye malunga nendlela eya phambili. Kodwa oku kuzakufuna igalelo kubantu abaninzi. ”
tags Coinbase, Cryptocurrency, iindaba
ICoinbase iphulukana neNkqubo yokuBolekisa phakathi kwesilumkiso seSecurity
I-Nasdaq edweliswe kwi-cryptocurrency exchange Coinbase ibhengeze ukuba ayisayi kuphinda iqhubeke nesicwangciso sayo sokuphehlelela inkqubo yokuBolekisa phakathi kwesoyikiso somthetho osuka kwiKhomishini yoKhuseleko kunye nokuTshintshiselana yase-US (i-SEC).
Utshintshiselwano olukhulu lwe-crypto lenze isibhengezo ngoLwesihlanu odlulileyo, sichaza ukuba:
“Injongo yethu kukudala iimveliso ezintle kubathengi bethu kunye nokuqhubela phambili umsebenzi wethu wokunyusa inkululeko kwezoqoqosho emhlabeni. Njengoko siqhubeka nomsebenzi wethu wokufuna ingcaciso yolawulo kumzi mveliso we-crypto xa uwonke, sithathe isigqibo esinzima sokungayazisi inkqubo ye-USDC APY. ”
UCoinbase wongeze ukuba: “Siyekile noludwe lwale nkqubo njengoko sijikisa umsebenzi wethu kwinto elandelayo. Sinamakhulu amawaka abathengi abavela kwilizwe lonke, kwaye sifuna ukunibulela nonke ngomdla wenu. Asizukuyeka ukukhangela iindlela zokuzisa iinkqubo ezintsha [nethembekileyo] neemveliso kubathengi bethu. ”
UCoinbase wabhengeza inkqubo yokuBoleka ngoJuni, echaza ukuba abasebenzisi abanomdla banakho “Zuza inzala kwi-USD coin (USDC) ngamaxabiso angaphezulu kwama-50x kwi-avareji yesizwe yeakhawunti yokonga yemveli.” Inkqubo ibonakalise ukuba abasebenzisi banokufumana ukuya kuthi ga kwi-4% APY ngokhuseleko oluqinisekisiweyo lwenqununu.
Ekuqaleni kukaSeptemba, inkampani yafumana iSaziso se-Wells malunga nenkqubo yokuBoleka kwi-SEC. UCoinbase utyhile ukuba: "I-SEC isixelele ukuba ifuna ukusimangalela malunga nokuBoleka. Asazi ukuba kutheni, ” ukongeza oko "I-SEC isixelele ukuba bacinga ukuba ukuBoleka imali kubandakanya ukhuseleko, kodwa bangatsho ukuba kutheni okanye bafikelele njani kweso sigqibo."
I-Coinbase iyaqhubeka ukuya kwi-Excel phakathi kokubuyela umva
Phakathi koku kubuyela umva, iCoinbase iyaqhubeka nokwandisa isiseko seenkonzo zayo. Kwiveki ephelileyo, utshintshiselwano olukhulu lwe-crypto lusebenzisiwe noMbutho weSizwe we-Futures (NFA) ukubonelela ngekamva kunye neenkonzo zokurhweba kwiqonga layo.
Kwakhona, iingxelo zibonisa ukuba uCoinbase kutshanje uqalise inkqubo yeebhondi ezihlanganayo ezi- $ 2 billion.
Ngapha koko, olona tshintshiselwano lukhulu kwi-cryptocurrency e-US lubhengeze nge-20 kaSeptemba ukuba iphehlelela iCoinbase Prime, iqonga elibanzi labatyali mali beziko.
tags Coinbase, Cryptocurrency, iindaba, sec
ICoinbase ijongene nokuThathwa koMthetho kwi-SEC yeNkqubo yokuCetyiswa kwayo
I-US Securities and Exchange Commission (i-SEC) ibonakalisile ukuba inokuhlawulisa uCoinbase ngokwaphula imithetho yezokhuseleko ngenkqubo ecetywayo yesivuno.
Kwiposti yebhlog ekhutshwe kwangoko namhlanje, uPaul Grewal-iGosa eliyiNtloko lezoMthetho eCoinbase-utyhile ukuba iarhente ithumele isaziso se-Wells kutshintshiselwano, athumela imibutho yabasemagunyeni kubaphenduli abaza kubazisa ngenjongo yokummangalela.
I-Coinbase iqaphele ukuba izakusebenzisana nomlawuli wezezimali malunga neenyanga ezintandathu kusungulo oluzayo lwenkqubo yokuBoleka imali yeCoinbase, eya kuthi ibonelele ngenzala esisigxina kubasebenzisi ekubolekiseni ngezinto ze-crypto.
Iinkqubo zokuboleka ziqhelekile kwindawo ye-crypto, kunye nezinye iinkampani ezinkulu nezincinci ze-crypto ezinikezela ngazo. UCoinbase uphawule ukuba: "Ezinye iinkampani ze-crypto bezineemveliso ezibolekisa kwimarike kangangeminyaka, kwaye iimveliso zokubolekisa ezintsha ziyaqhubeka ukumilisela kwinyanga ephelileyo."
Nangona i-SEC ingakhange icinezele nakweyiphi na inkampani ye-crypto ebonelela ngeenkqubo zesivuno ngaphambili ngoku, abanye abalawuli belizwe ngaphambili bebehamba emva kweBlockFi yokubonelela ngeenkonzo ezifanayo.
I-Coinbase ikhuphe iRejista yoLuhlu lwayo lokulinda ngelixa uphendula uphando lwe-SEC
Ngaphambi kwangoku, uCoinbase wadibana ne-SEC ukuxoxa ngenkqubo-sikhokelo yenkqubo yesivuno. Utshintshiselwano lwe-behemoth crypto lubonelele ngeenkcukacha ezibanzi kwaye lwaphendula yonke imibuzo malunga nenkqubo evela kumlawuli. UGrewal uqaphele ukuba: "I-SEC isixelele ukuba bacinga ukuba ukuBoleka imali kubandakanya ukhuseleko, kodwa bangatsho ukuba kutheni okanye bafikelele njani kweso sigqibo."
Nangona kunjalo, iCoinbase ayikhange iyilahle le nkqubo kodwa yaqhubeka ukuyibhengeza ngoJuni ngaphandle kokubeka umhla wokumiliselwa kwaye yaqalisa uluhlu lokulinda ukubhalisa abathengi bokuqala.
IKhomishini emva koko yasungula uphando ngokusesikweni malunga nenkampani ye-crypto, icela amaxwebhu, iimpendulo ezibhaliweyo, kunye nobungqina obufungelweyo lingqina elidibeneyo. Nangona iCoinbase ilandele inkqubo efanelekileyo kwiimfuno ezininzi, ayiphumelelanga ukubonelela ngeenkcukacha zabathengi ababhalisiweyo. IGosa eliyiNtloko lezoMthetho longeze ukuba: "Ngaphandle kokugcina imali kwi-Coinbase kwimarike kunye nokubonelela ngolwazi oluneenkcukacha, i-SEC ayisayi kuchaza ukuba kutheni ibona ingxaki. Endaweni yokuba basixelele ukuba, ukuba siza kusungula ukuBoleka imali, bazimisele ukumangala. ”
tags Coinbase, Inkqubo yokuBoleka, iindaba, sec
I-Coinbase yokuTyala i-10% yeNzala yeNzala kwiiCrypto phakathi kweziCwangciso zoLwandiso
Ukuhlaziywa: 20 Agasti 2021
Olona tshintshiselwano lukhulu lwemali yedijithali eMelika, iCoinbase, liceba ukwandisa ii-crypto zokubamba kwiphepha lomncono nge-500 yezigidi zeedola ngokwesibhengezo samva nje se-CEO yenkampani, uBrian Armstrong.
Nangona engakhange ayikhankanye imali yedijithali yeCoinbase okwangoku enezicwangciso zethu zokuyifumana, uqaphele ukuba i-10% yazo zonke iingeniso ziya kungena ekufumaneni i-crypto ukusukela ngoku. U-Armstrong ucacisile ukuba ulindele ukuba esi sabelo senziwe "Hlala ukhula ekuhambeni kwexesha njengoko uqoqosho lwe-crypto lukhula."
Ulwabiwo lwangoku lwe-10% kufuneka lubambe ubunzima ngokwe-USD, kuthathelwa ingqalelo iingxelo zenzuzo zembali ezivela eCoinbase. Kwi-Q2 2021, inkampani ixele irekhodi lokophula i-1.6 yezigidigidi kwinzuzo yenzuzo. Eli nani lokophula irekhodi yayiyi-4,900% yokunyuka kwengxelo yayo ye-Q2 yomvuzo ngo-2020.
Oko kwathiwa, utyalo-mali lwe-10% kwisithuba se-crypto luya kuwela kwindawo ethile ejikeleze i-160 yezigidi zeedola ngekota.
Umphathi weCoinbase ukwaphawule ukuba unethemba elikhulu lokuba kwixa elizayo, utshintshiselwano kufuneka lube namandla "Lisebenza ngakumbi ishishini lethu kwi-crypto," njengoko namhlanje "isengumxube."
ICoinbase iyanda eJapan
Ngeli xesha, inkampani ibhengeze izicwangciso zokwandisa eAsia kusuku olungaphambi kwe-tweet ka-Armstrong. Isiteyitimenti esisemthethweni siphawule ukuba utshintshiselwano, oluqhayisa malunga nezigidi ezingama-70 zabasebenzisi kunye nokusebenza kumazwe angaphezu kwe-100, kuye kwanda ukuya eJapan. Ifemu ichaze iJapan njenge "Lelinye lamazwe okuqala ukwamkela i-crypto kwaye yenye yezona ntengiso zikhulu ngokwamanani orhwebo nge-crypto emhlabeni."
Ukufezekisa oku, utshintshiselwano nge-crypto lisebenzisana nebhanki eyaziwayo yendawo, iMitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Oko kwathethi, abasebenzisi baseJapan banokufikelela kwiqonga lokurhweba ngePlatifomu yeDiphozithi ekhawulezayo ye-MUFG.
Inkampani iqaphele ukuba izakukhupha iimveliso zentengiso kuqala, kubandakanya neecryptos ezintlanu ezithengiswa kakhulu, kwaye emva koko yongeze iimveliso ezingaphezulu.
Iingcebiso: Uyikhetha njani eyona siguquli se-crypto
Ukuhlaziywa: 19 Juni 2021
Zininzi iindlela zokuthenga i-imali yedatha ngoku. Oku kukumba umgodi, ukuthenga ngotshintshiselwano, okanye ukuthenga ngokuthe ngqo kwabanye abanini. Kungekudala okanye kamva, umzuzu uyeza xa kuya kufuneka ukusebenzisa ii-cryptocurrency exchanges ukutshintshiselana ngemali ye-fiduciary -i-ruble eziqhelekileyo, i-euro okanye iidola.
Oku kubangelwe kukuba iimalike zehlabathi zinolona tyalo mali lukhulu.
Abatshintshi abangaziwayo be-Cryptocur lwemali ziinkonzo ezikwi-Intanethi eziguqula iimali kwicala elinikiweyo. Eyona nto iphambili kubo ngaphezulu kwezinye iindlela "zokukhupha" imali ebonakalayo ilula kwaye isebenza kakuhle. Kwiimeko ezininzi, abasebenzisi akufuneki baqinisekise ubungqina babo okanye babhalise ukwenza intengiselwano. Banokutshintsha imali ngalo naliphi na ixesha losuku.
Iindidi ezahlukeneyo zeemali zokugcina zitshintshelwa kwimali kwi-akhawunti yebhanki ethile, inkqubo yentlawulo ye-elektroniki, kunye nemali. Nangona kunjalo, bonke abatshintshi be-cryptocurrency bathatha isabelo esithile sentlawulo njengomvuzo wentengiselwano-ikhomishini. Ngoku kukho ukhetho olukhulu lwabananisi, kubandakanya abo basebenza ngemali ebonakalayo.
Ungayitshintsha njani imali yedijithali yemali kwi-Intanethi
Iindlela eziphambili zokuthengisa kunye nokuthenga ii-cryptocurrensets zibandakanya:
• Abatshintshi. Iinkonzo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula, kubandakanya i-cryptocurrensets, amakhadi asebhanki, iinkqubo zokuhlawula nge-elektroniki, ii-mobile operators kwaye, kwezinye iimeko, nkqu nemali. Basebenza ngaphandle kokungqinisisa kwaye abanyanzelisi nayiphi na imfuneko kumsebenzisi.
• Ongaziwayo Utshintshiselwano ngeDijithali yemali. Banokubekwa embindini kwaye babelwe kwindawo enye, kodwa kuphela kukurhoxa kwenkxaso yangaphambili kwi-fiat. Icala elibi kukuba ukusebenza ngamakhadi kunye neenkqubo zokuhlawula, ukutshintshiselana nge-cryptocurrency kuhlala kufuna ukuqinisekiswa kwesazisi, ke olu khetho alunakulunga kwabo bafuna ukuthengisa ngokungaziwayo.
• Iindawo zotshintshiselwano zoontanga. Ukutshintshiselana nge-p2p kunika ithuba lokuthenga nokuthengisa ngokungaziwayo kwaye ngaphandle kwabalamli. Abasebenzisi bananisa iiasethi ngokuthe ngqo omnye komnye, kwaye ukwenzela ukuba intengiselwano ikhuseleke, iisayithi zixhasa indlela ekhethekileyo yokuhamba. Ugcina i-cryptocurrency kwi-akhawunti eyahlukeneyo yokuhambisa de isicelo sihlawulwe.
Kwezona nkonzo zaziwayo zokubeka esweni (simahla, ewe), kunokubonwa oku kulandelayo:
• IKursEkspert - esweni enkulu ngesiseko esikhulu sabananisi.
• BestChange yeyona nkonzo indala yokubeka iliso.
• OkChanger ikwayinkonzo enkulu yokubeka iliso, nangona ingathandwanga njengeyokuqala. Nangona kunjalo, iya kuyivumela ukuba yongezwe ipholile kakhulu ukufumana ulwazi oluninzi okanye oluncinci olungeleleneyo. Umgaqo wokusebenza ufana kakhulu nenkonzo yangaphambili.
Ezi nkonzo zingasentla zokubeka esweni zahlukile kwabanye abo bakhuphisana nabo ekupheleleni nasekuthembekeni okungaphezulu okanye okuncinci okuphezulu kolwazi. Kwakhona, nditsalela ingqalelo kwinto yokuba kungcono ukuba ungaxhomekeki komnye wabo, kodwa ubeke esweni zontathu.
Izinto eziluncedo nezingeloncedo kubananisi
Abatshintshi abangaziwayo be-Cryptocurrency yindlela ekhawulezayo nekhuselekileyo yokutshintshiselana ngeemali zedijithali zemali yokwenene okanye enye into.
Umzekelo, masithathe umzimba othengisayo obizwa ngokuba yi "xchange". Ngokubanzi, lo ngumthengisi ogcina imali encinci, xa kuthelekiswa nabanye. Masiqale ngoncedo lwe-xchange (ngethamsanqa kukho):
1. Ukukhetha okukhulu kweenkqubo zentlawulo zotshintshiselwano. Ungadlulisela ngokuthe ngqo imali kwikhadi le-Sberbank, okanye qiwi.
Uncedo olunxulumene nokutshintshiselana nge-imali yedatha, kufuneka usebenzise phantse inkonzo enye (kwimeko yethu, kukutshintsha).
tags Utshintshiselwano ngeDijithali yemali engaziwayo, UThixoex, upapasho ndaba zekhampani
Oyena Mrhwebi ubalaseleyo eMhlabeni
“Ubomi ngokwabo lishishini eliyingozi. Ngamanye amaxesha sibhabha phezulu, sonwabele impumelelo enkulu. Kodwa ngequbuliso siye saphoxeka ngokunzulu kunye nenyani eyoyikisayo yokusilela, sishiya iintliziyo zethu zibuza ukuba ingaba ikhona into ekufanele ukuba ijonge phambili. ” -UJoe Stowell
Kukho abathengisi abakhulu kwihlabathi liphela. Ukuba awubazi, ndiyabazi abanye babo. Bafumana imali yabo ngokurhweba kwaye bakhululekile emalini. Ngoku umbuzo ngulo: Ngubani oyena mthengisi ubalaseleyo emhlabeni? Ewe, oyena mthengisi ubalaseleyo ukhona. Ngoku, andizukukhankanya amagama, kodwa ndiza kukuxelela ukuba leliphi elona shishini libalaseleyo.
Umrhwebi obalaseleyo akaphikisani neemarike- uhlala ezivuma iimpazamo zakhe. Uninzi lwabantu ludla ngokuziva lunyanisile, nokuba iinyani zingqina ukuba ziphosakele. Abaqikeleli aboyikisayo abazamkeli iimpazamo zabo. Ngokwenene yimeko yengqondo eyenza ukuba umntu angavumi ukucinga ukuba wenze impazamo, nokuba inyani ibonisa enye into. Ukuzithemba ngokugqithisileyo ekukhweleni kwindawo enesimo esibi ngokuqinisekileyo ayisiyonto intle. Abarhwebi abaphezulu bahlala bevuma iimpazamo zabo.
Kwangokunjalo, umrhwebi ogqwesileyo unokusebenzisa naluphi na uhlobo lwenkqubo elungileyo yokulindela kubandakanya izicwangciso ezisisiseko kwaye alindele ukuba intengiso iya kuhamba kwicala elithile. Ukuba ukunyuka kwamaxabiso okanye amanani asisiseko ayenzeka ngokuchasene nolindelo lwakhe, uya kugudisa zonke izikhundla zakhe kwangoko. Akukho ziphikiso, akukho themba. Iimarike zezemali azinanceba kuye nabani na. Ukuba izinto zihamba ngokuchasene nawe, phuma kwimarike ngaphandle kokuchitha ixesha. Yonke into elungileyo endiyifundileyo ilungile ngokwenene ekusikeni izikhundla ezibonakala ngathi ziyahamba ngokuzimisela ngokuchasene nabo. Nangona kunjalo, ngalo lonke ixesha intengiso ibabonisa ukuba balungile, baqhuba ukuzuza kwabo ixesha elininzi.
Umrhwebi omkhulu ukwamkela ukungaqiniseki okunokuchaphazela nayiphi na iodolo evulekileyo; Bade benze oku ngaphambi kokuba bavule iiodolo. Ukungaqiniseki kuhlala kungumlingani wethu, kuba intelekelelo ngumdlalo ngokwawo. Ukungathandeki kubandakanyiwe kumdlalo. Umrhwebi ogqwesileyo akazive elusizi xa urhwebo luhamba gwenxa, kwaye engonwabanga xa urhwebo luhamba kakuhle.
Sebenzisa iNkqubo ngokuNenzuzo kuxhomekeke kuMqathango
Ngaba ungumrhwebi ophumeleleyo? Ngaba uyazithanda iziphumo ozivelisileyo njengomrhwebi kunyaka ophelileyo? Ukuba akunjalo, zeziphi iimpazamo ozenzileyo kwaye ungaziphucula njani iziphumo zakho ukusukela ngoku? Ungadinga inkqubo yorhwebo ethatha unonophelo lwezinto ezithile ezinomdla ezifaka igalelo kurhwebo olunenzuzo. Ngaba unazo ezi zinto engqondweni? Nceda uqwalasele ezinye zazo:
1. Ngaba ndinomthetho endimele ukuwulandela kwimisebenzi yam yokuthelekelela? Isicwangciso-qhinga sokurhweba kufuneka sijongane nenqanaba lokuzimisela kunye nomdlandla apho umntu anokufikelela kuwo nawuphi na umzamo ophezulu okanye ishishini. Ukungena, ukuphuma, ubungakanani besikhundla kunye neminye imigaqo yesi sicwangciso kufuneka ilandelwe kwileta.
2. Ngaba ndinaso isicwangciso sexesha likaxakeka esibi kakhulu? Inkqubo elungileyo kufuneka ibe nomgaqo (okanye imigaqo) enokujongana nayo nayiphi na intshukumo engalunganga enokuchaphazela urhwebo oluvulekileyo, kunye nomgaqo okwenza ukuba uphume ngokukhawuleza ukuba izinto azisahambelani nawe.
3. Ngaba ndinenkqubo elungileyo yokulindela enokuthi indenze ukuba ndisinde kuhlobo lwangoku lwentengiso? Inkqubo elungileyo kufanele ukuba yenze imali kwiimeko zentengiso elungileyo kwaye yenze ukwehla okuncinci njengoko kunokwenzeka kwiimeko zentengiso ezimbi. Kuya kufuneka ukuba ulindelo oluqinisekileyo lubandakanywe kuyo, oko kuthetha ukuba ubuncinci, kulindeleke iidola ezimbini kwidola nganye esengozini. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ukuba ube nenzuzo ixesha elide nokuba uchane nge-30% kuphela.
4. Ngaba ndinendlela eza kuqhubeka nokusebenza nokuba iimeko zentengiso zitshintsha ngaphandle kwesilumkiso? Ewe, inkqubo elungileyo yokurhweba kufuneka isinde kuzo zonke iimeko zentengiso. Inkqubo elungileyo yokurhweba inokusebenza kakuhle kwimarike yenkomo okanye yeebhere. Kodwa mhlawumbi kuya kufuneka uphume kwiimarike ezidibanisa kakhulu! Kufuneka nje unamathele kwimigaqo yayo.
5. Ngaba ndide ndibone uhlobo lwangoku lwentengiso? Kuyanceda ukuba uqaphele uhlobo lwentengiso ethengiswayo kunye nemeko ekhoyo ngoku yentengiso. Oku kunokukunceda uthathe izigqibo zokuthengisa unolwazi.
6. Ngaba ndihlala ndibeka imeko yengqondo yam ngendlela eyenza ukuba ndenze amashishini am ngokugqibeleleyo? Kufuneka usebenze ngokwakho. Kukho abathengisi abasebenzisa ubungakanani bendawo enkulu kakhulu kunaleyo icetyiswayo. Abanye bangena kurhwebo olongezelelweyo ngokusekwe kuhlalutyo olwahluke ngokupheleleyo kwimigaqo yenkqubo. Abanye abayisebenzisi nokuma kwaphela-ngokuchasene nomgaqo wenkqubo! Umrhwebi osebenzisa inkqubo elungileyo kufuneka afunde ukuzilawula kwaye enze izinto ezilungileyo kwiimarike kunokwenza izinto ezinokwanelisa iimvakalelo zabantu.
Ukuba uphendule uhayi kuwo nawuphi na wale mibuzo, unemikhondo malunga nokuba kutheni iziphumo zakho zexesha elidlulileyo bezingathandeki. Oku, ngendlela, zimbalwa kuphela zemibuzo onokuzibuza yona. Ukuba unokuthatha le miba ingentla uyithathele ingqalelo kwaye usebenze ngempumelelo, uya kufumanisa ukuba urhwebo lunokuba yinzuzo ngokwenene.
Xa iimarike zisiya endaweni yethu, siziva siyintshatsheli. Sicinga ukuba singumrhwebi omkhulu kwaye sikrelekrele kunabanye abathengisi. Kwiimeko ezininzi, kuphela ngabarhwebi abanamava okulunga kunye namacala amabi eemarike kwaye basinda kubo bonke ngabo bafaneleke ngokwenene ukuba ngabacebisi bethu. Kuya kufuneka ulibale malunga nexesha lakho elidlulileyo kwaye ujonge kwikamva eliqaqambileyo. Kubalulekile ukuba ukujonge ukusilela kwakho kwangaphambili kwaye ucinezele phambili.
Esi sahluko siqukunjelwa ngesicatshulwa esingezantsi:
"UStephen Covey uthi - 'Phila ngaphandle kwengcinga yakho, hayi imbali yakho'. Jonga phambili, hayi kwisipili sakho sokujonga ngasemva - okanye uqinisekile ukuba uza kuphazamiseka. Ayisiyiyo eyenzekayo kuwe, yindlela obuphatha ngayo obalayo. Iimpazamo zakho zahluke ngokupheleleyo kule nto uyiyo njengomntu. Ziqhenye ngokuba usondela kwelinye inyathelo usiya kwiinjongo zakho. Sukuyikhubaza ikamva lakho ngokuzidubula elunyaweni kuba wenze isikrufu. ” -ULouise Bedford
"Omnye wemicimbi ephambili abarhwebi abatsha abanayo kukuba banethemba lokufumana imivuzo emikhulu ngexesha elifutshane. 'Ndiza kuthatha iakhawunti yam yorhwebo eyi- $ 5,000 ndiyenze ibe sisigidi seedola ngonyaka, kwaye ndixelele umphathi wam ukuba angaya phi!' Eli nqanaba lokubuya yinto engekho ngqiqweni. Ngokwandisa ubungakanani beakhawunti yakho nje ngamanqaku eepesenti ezimbalwa ngenyanga, amandla enzala eya kwenza ukuba ube sisityebi, kodwa ngaphezulu kwexesha elide. Ukurhweba njengekhondo lomsebenzi kukubaleka, hayi isprint. Abo bazama ukwenza okuninzi kakhulu ngokukhawuleza bahlala bekhulisa iakhawunti yabo kwaye bathathe umngcipheko ngokungeyomfuneko ngokwenza njalo. Inye okanye ezimbini ilahleko ezinkulu zinokususa iiveki ezimbalwa okanye iinyanga zeenzuzo ezilungileyo! Ukuba uyayenza loo nto 'usebenze simahla' njengoko iakhawunti yakho ithatha ezi zinto ziphambili ziphambili. Ngaba ukhona umntu ofuna ukusebenzela simahla? Ndiyazi ukuba andazi. ” -Rick Wright (kwiZiko loRhwebo kwi-Intanethi)
Lo mbhalo uthathwe kwincwadi “Livule ithuba lokuShishina”
tags Abarhwebi abagqwesileyo, Uhlalutyo Technical, Iinkqubo zokurhweba
ICoinbase ifumana iNkampani yeDatha yoHlolo; Ivumela ukuThengwa kweCrypto ngePayPal
Ukuhlaziywa: 30 April 2021
I-Coinbase, eyona cryptocurrency inkulu eMelika, ibhengeze ukuba abasebenzisi ngoku banokuthenga iiasethi zedijithali eqongeni ngokusebenzisa amakhadi etyala kunye neeakhawunti zebhanki ezinxulunyaniswe nePayPal kunye neVenmo. Nangona kunjalo, le nkonzo ivumela kuphela isixa esilinganiselweyo sokuthengwa kwe-crypto okwangoku.
Ngokwesiqhelo, ukudluliselwa kwe-ACH kunye nocingo kuthatha ixesha elide ukwenza. Nangona kunjalo, ngeakhawunti yePayPal, abasebenzisi banokuqala ukwenza imicimbi kwiCoinbase kwangoko. Umsebenzisi akanyanzelekanga ukuba abonelele ngeakhawunti yebhanki edityaniswe neCoinbase.
Ukuthenga i-cryptocurrency usebenzisa i-PayPal, kuya kufuneka ikhethwe njengendlela yokubhatala. Emva koko, kuya kufuneka ungeze ikhadi lebhanki kwiakhawunti yebhanki edityaniswe kwiakhawunti ye-PayPal kwaye uthenge, kwaye isebenza kuphela nge-25,000 yeedola ngosuku.
Inketho yokuthenga ye-PayPal crypto kwi-Coinbase ifumaneka kuphela kumazwe ambalwa, kubandakanya i-US, Canada, EU kunye ne-UK.
ICoinbase ifumana iSkew
Okwangoku, uCoinbase usandula ukubhengeza ukufunyanwa kweqonga lokuhlalutya idatha, elinokuthi livumele inkampani ukuba ihambise uhlalutyo lwedatha olusebenzayo lwexesha elifanelekileyo kumaziko nakubarhwebi.
Oku kufunyanwa kuya kunceda inkampani ikwazi ukujongana namaziko emali angaphezulu kwe-7,000 kunye nokunyusa umnikelo wayo ophambili. Oko kwathethi, ukufunyanwa kweCoinbase kuxhomekeke kwiimeko zokuvala ngokwesiko kwaye kulindeleke ukuba ivalwe kwikota yesibini.
I-Skew, inkampani esekwe eLondon yasekwa e-2018 kwaye isebenza ngaphezulu kwe-100 yabathengi, kubandakanya ne-One River Asset Management kunye ne-Susquehanna International Group.
Kwangoko kule nyanga, iCoinbase yaba lishishini elidweliswe esidlangalaleni, ngexabiso lesabelo lalo libetha incopho yeedola ezingama-430. Ngexesha lokushicilela, i-COIN ithengisa nge- $ 294.77.
tags Coinbase, Cryptocurrency, iindaba, PAYPAL
Igqala loMtyali mali wase-US: I-Cryptocurrency-Uqoqosho lelona thuba lilandelayo le-Multi-Trillion-Dollar
Ukuhlaziywa: 18 April 2021
Utyalomali olukhulu-uRon Conway kudliwanondlebe ne-CNBC ngolwesiThathu uxoxe ngombono wakhe othembekileyo kwimveliso ye-cryptocurrency kunye nekamva layo. IConway, ekwabizwa ngokuba yiSilicon Valley “Ingelosi enkulu,” uthelekise iCoinbase neGoogle, apho angatyali mali kwangoko.
Ingxowankulu yaseMelika yeli lizwe, ethathwa njengoGodfather waseSilicon Valley, uxele ukuba uthathe inxaxheba kwimijikelo yenkxaso-mali yembewu kwizinto ezininzi zobuchwephesha kunaye nabani na. UConway wayengumtyali mali wokuqala kumagama amakhulu obuchwephesha anje ngeGoogle, Facebook, Twitter, Reddit, Airbnb, Square, Pinterest, phakathi kwabanye abaninzi.
Igqala lomtyali mali lithethe kakhulu ngemakethi ye-crypto, uqaphele ukuba:
“Ukuba uqala encotsheni yefaneli. Jonga ubungakanani bentengiso kuqoqosho lwe-crypto. Kunyaka ophelileyo, yayiyi- $ 778 yezigidigidi, eya ngaphezulu kwetriliyoni. Kwaye uqoqosho lwe crypto lusebusaneni. ”
Ukwaqinisekisile ukuba uqoqosho lwe-crypto lunokuba lithuba elilandelayo lokuphindaphindeka kwetriliyoni.
URon Conway kwiCoinbase
Xa ubuzwa malunga neCoinbase, ethi IPOed kwiveki ephelileyo kwaye inexabiso elikhulu kunenkampani ethengisa kuyo, uConway wathi:
"Ukuba abantu bajonge ubungakanani beli thuba, ke intengiso yeenkampani ijongeka ingcono."
I-Coinbase yadubula yaya kuthi ga kwi-100 yezigidigidi kumaxabiso kwangoko emva kokuqala kwawo esidlangalaleni.
Ingelosi ephezulu yongeze yathi:
“Sikwimakethi enomoya nokuba kunjani, ke zonke iinkampani zixabisa ixabiso eliphezulu namhlanje. Xa ujonga ubungakanani bentengiso ye-crypto, ndicinga ukuba ziyafana. ”
I-Coinbase (i-NASDAQ: i-COIN), e-US-based cryptocurrency exchange opharetha, yaya esidlangalaleni ngokudweliswa ngqo kwi-Nasdaq ngo-Epreli 14. Ngokuka-Vandatrick, inkampani yohlalutyo lwedatha ebeka iliso kwimisebenzi yokuthengisa ngaphezulu kwe-9,000 yamasheya kunye ne-ETFs e-US, Abatyalomali abathengisayo bathulule ngaphezulu kwe- $ 57 yezigidi kwiCoinbase ngosuku lwayo lokuqala. Ifemi yohlalutyo iqaphele ukuba i-Coinbase's IPO yayiyeyesihlanu ngobukhulu ngokusekwe kukuthengwa kweentengiso kule minyaka mine idlulileyo.
I-Coinbase Ekugqibeleni i-Debuts kwi-Nasdaq, i-Surges 50 Percent kwangoko
ICoinbase yenze imbali namhlanje, emva kokunikezelwa kwayo esidlangalaleni (IPO) kwiNasdaq. Ixabiso lentengo yotshintshiselwano (i-NASDAQ: i-COIN) yabona ispike esikhulu emva nje kokuqala kwestokhwe.
Ixabiso lesitokhwe inyuswe ngama-52.4% ukuya kwi- $ 380 ngesabelo ngasinye, njengoko uluhlu lwayo olulindeleke kakhulu luqale kutshintshiselwano olunobunzima kule mvakwemini.
I-rally ithumele i-capital capital ye-firm kwi-99.6 yezigidigidi zeedola, ngaphezulu kokuqikelelwa kwayo nge-34.6 yezigidigidi. Lo msebenzi wexabiso ubonwe kwi-COIN ulingana namatyala ezigebenga ezinjenge-Facebook kunye ne-Airbnb.
Inkampani iqaphele ukuba ikhethe ukudweliswa ngokuthe ngqo, oko kuthetha ukuba akukho zabelo zitsha ziya kukhutshwa, kunye nezabelo ezenziwe ukuba zifumaneke kubatyali mali abakhoyo kwisicatshulwa se- $ 250 ngesabelo ngasinye.
Ingxelo yeNgeniso yokuRekhoda
Utshintshiselwano olusekwe e-US lwemali yedijithali yinkampani yokuqala yedijithali yokuya esidlangalaleni phakathi komnqweno okhulayo wee-asethi ezibonisa ukunyuka kwamaxabiso ngexesha loxinzelelo lwezoqoqosho kwihlabathi liphela.
Utshintshiselwano nge-imali yedatha yedijithali ivelisa ingeniso yayo ekuhlawuliseni iifizi kuthengiso kwintengiso ye-cryptocurrency, isenza ukuba iimarike eziguqukayo zibe yinzuzo ngokukodwa kwinkampani.
Kwingxelo yayo yekota yamva nje, uCoinbase uqaphele ukuba ekujoliswe kuko kwingeniso ye-Q1 2021 yayiphakathi kwe- $ 730 kunye ne- $ 800 yezigidi. Inkampani igqibe ukunika ingxelo $ 1.8 billion kwingeniso kwiinyanga ezintathu zokuqala zonyaka-mali. Inkampani ngoku inamagama angaphezulu kwezigidi ezingama-56 zabasebenzisi abaqinisekisiweyo.
Okwangoku, iqabane lokuseka nelokulawula i-Eden Block, u-Lior Messika, uqaphele ukuba:
"Ukukhula okunamandla kwenkampani, exhaswa bubukho obukhulayo eNtshona, kubeka isiseko sokuba loluphi olona luhlu lubalulekileyo kwezobuchwephesha kunye nomtshintshi womdlalo ogqibeleleyo kwishishini le-crypto."
tags Coinbase, Cryptocurrency, NASDAQ, iindaba
Ukuqhekeka kweBitcoin eNtsha yaMaXesha aPhezulu ePhambili kuLuhlu lweCoinbase Nasdaq
Ukuhlaziywa: 13 April 2021
Ngokusekwa kweCoinbase ukumilisela uluhlu lwayo loluntu eNasdaq ngomso, abatyali zimaphethelweni ezihlalo zabo kwinto abanethemba lokuba inokuba yeyona nto ibalulekileyo yokwamkelwa Bitcoin (BTC) kunye needijithali ngokubanzi. Esi siganeko siya kuba sisihlandlo sokuqala embalini ukutshintshiselana nge-imali yedatha enkulu njengeCoinbase yenze lo msebenzi.
I-Coinbase irekhode ukukhula okukhulu kunyaka ophelileyo okhokelela kwi-IPO yayo, kubandakanya nokunika ingxelo ngengeniso ye-1.8 yezigidigidi zeerandi kwi-Q1 ye-2021 kuphela. Ngokomxholo, yonke i-2020 ibone malunga ne- $ 1.3 yezigidigidi kwingeniso yenkampani.
Iingxelo zengeniso elungileyo kwiCoinbase yenzeke ecaleni kwesipikha ngaphezulu kweempawu ezingama-60k zeedigital yemali ephambili.
Oko kwathiwa, ngokusungulwa kweqela le-crypto lobby ye-Crypto Council ye-Innovation yi-Fidelity, Square, Coinbase, kunye neParadigm, amathemba afunyenwe ukuba imigaqo emitsha iya kuba nolwazelelelo ngakumbi kumzi-mveliso kwaye inokudala ixabiso elitsha ekujoliswe kulo kwiBitcoin.
UMat Blom, iNtloko yeNtengiso kwinkampani yeasethi edweliswe kwiNasdaq iDiginex, kutshanje uqaphele ukuba:
“Iidola ezingama-70,000 yeyona nto kujoliswe kuyo ziinkunzi. Qho ngenyanga kuye kulo nyaka ukubhaliswa kwelona xesha liphezulu. ”
Amanqanaba aphambili eBTC okuBukela-Epreli 13
IBitcoin ekugqibeleni ilusulile uphawu lwe- $ 60k kwirali engazange ibonwe ngaphambili, phambi koluhlu lweCoinbase. Isantya sokukhawulezisa sikhawulezisiwe kulandela ikhefu elingaphezulu kwenqaku le- $ 61, elibonise ukuba imali yedatha ikhuselekile i-4.6% inyuka namhlanje.
Oko kwathiwa, i-rally ibonakala isesesigabeni sayo sokuqala, njengoko iinkunzi zeenkomo zibeka amehlo abo kwinqanaba lama-65,000 eedola. Ngokusekwe kwisibonisi sethu seMACD, i-BTC isekude neemeko zokufudumeza intsingiselo yokuba ukuqhubeka okunyanzelekileyo kuya kuphinda kulandele ukuhlanganiswa okwangoku okungaphantsi kwendawo engama- $ 63,727 (indawo entsha yexesha lonke).
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 63,727, i- $ 64,000, kunye ne- $ 65,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 63,000, $ 62,550, kunye ne- $ 62,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 2.19 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.18 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 53.9%
tags Bitcoin, BTC, Coinbase, Cryptocurrency, iindaba